Caadiga: Qeybaha Diidmada Adeega (DoS) Weerarrada
Weerarrada DoS waa isku day xaasidnimo ah si aad u sameysid server-yadaada ama ilaha shabakada oo aan si ku meel gaar ah ama si joogto ah u joogin. Khasaaradu waxay ku guuleysteen hawshan iyada oo adeegsanaya adeegyo kala duwan. Natiijo ahaan, waxay joojin karaan ama joojin karaan xisaabaadkaaga noloshooda. Weerarrada adeegga diidmada waxaa badanaa ku lug leh makiinado badan oo la adeegsado si loo yareeyo kombiyuutarada cusub iyo qalabka mobile - cafe table set outdoor. Mashiinnadani waxay keenaan dayacmooyin kala duwan oo ay daadadku ku yihiin ilaha la beegsanayo codsiyada joogtada ah, weydiimaha, iyo farriimaha aan la rabin. Weerarrada DoS waxay saamayn ku yeelan karaan aaladahaaga waxayna badanaa la fuliyaa sida botnets
Andrew Dyhan, oo ah Semalt Maamulaha Guusha Macaamiisha, ayaa sheegay in weerarrada DoS ay u kala qaybsan yihiin laba qaybood oo kala duwan:
1. Weerarka lakabka miiska ee DOS
Weerarka noocaas ah ee DoS waxaa ka mid ah daadadka HTTP, weerarada eber-zay ama weerarka gaabiska ah (Slowloris ama RUDY). Weerarka DoS wuxuu ujeedkiisu yahay inuu abuuro dhibaatooyin badan oo ka mid ah nidaamyada hawlgalka, habka isgaarsiinta, iyo codsiyada websaydhka. Waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo aan waxba galabsan oo sharci ah, codsiyana u muuqda kuwo la isku halleyn karo, laakiin baaxadkooda ayaa lagu qiyaasaa sida codsiyada labaad..Weerarkan DoS wuxuu ujeedkiisu yahay inuu ka qariyo codsiyada la beegsanayo oo leh codsiyo badan, oo keenaya xasuusto sare iyo isticmaalka CPU. Waxay ugu dambeyntii gacmo ama shil geli doontaa codsiyadaada kombiyuutarka.
2. Weerarka ISS ee lakabka
Weerarka lakabka ee ISS wuxuu ka kooban yahay UDP daadad, daadad SYN, amplifications NTP, amplification DNS, SSDP qiyaasaha, iyo isdhaafsiga IP. Kuwani waa dhammaan xayiraadyada ugu sarreeya oo lagu qiyaaso gigabits halkii labaad. Waxa kale oo lagu cabiraa qaabka baakidhka sanadka labaad, mar walbana waxaa sameeya kombuyutarada zombies ama botnets
Sidee ayuu weerarrada DoS u fidiyaa?
Cybercriminals waxay raadinayaan inay qabtaan oo ay xakameeyaan boqolaal kun, xitaa malaayiin casri ah iyo kombiyuutaro. Waxay doonayaan inay u dhaqmaan sida mansabka zombies ama shabakadaha shabakadaha iyo in ay soo gudbiyaan weerarrada Adeegga Diidmada Adeegga (DDoS), ololaha waaweyn ee spam, iyo weerarrada kale ee internetka. Xaaladaha qaarkood, cybercriminals waxay aasaasaan shabakad weyn oo ah jajabyo iyo mashiinno cudurka qaba si ay u helaan shabakadaha iyo qalabka cusub, sida iibka tooska ah ama kirada. Spammers ayaa laga yaabaa inay kireeyaan oo iibsadaan shabakadaha si ay u howlgalaan ololayaasha spam ee aad u ballaaran.
DoS-ga botnet iyo qalabkooda:
Abuuraha botnet waxaa loogu yeeraa bot bot ama botmaster. Isaga ama ayada ayaa xakameynaya qadiyadaha DoS ee meelaha fogfog ka shaqeeya iyo in ay maalin kasta u xilsaaraan howlaha qaarkood. Bixiyayaashu waxay la xiriiraan serverka DoS ee iyada oo loo marayo wadiiqo qarsoodi ah sida qawaaniinta aan waxba galabsan, shabakadaha HTTP iyo shabakadaha IRC. Isaga / iyada waxaa laga yaabaa inay isticmaalaan goobaha warbaahinta bulshada sida Twitter, Facebook, iyo LinkedIn si ay ula xiriiraan dadka kale.
Kombiyuutarayaasha botnet ayaa si sahlan ula xiriiri kara ama kaashan kara shabakadaha DoS iyo shirkadaha kale ee botnet, iyagoo abuuraya shabakad P2P oo wax ku ool ah kaas oo kantaroola khabiiro baaskiil ah ama dhowr ah. Waxa loola jeedaa in qof kastaa uusan bixin karin tilmaamaha shabakadda DoS maaddaama weerarradu ay heystaan ​​asal badan oo khaas ah oo kaftamaya oo og inay asal ahaan ka soo jeedaan. Qalabka DoS waa qarsoodi ka dambeeya adeega aan caddayn oo udub dhexaad u ah macaamiishooda iyagoo leh qalab aad u sarreeya, taas oo dhab ahaantii waxtar u leh.